Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9320 / 9220 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9320 / 9220 Curve
Ihlanganisa Classic ifomu factor, ukusekela BlackBerry ubuchwepheshe magnetic futhi omuhle ukuthungwa enkulu lesikhumba. Quality izinto kamakhi smartphone.
Lokhu kwenzeka othanda iningi lamakhasimende ethu futhi abe ethengwa kakhulu real! Futhi lokhu kuyaqondakala, ngoba ihlanganisa Classic ifomu factor, ukusekela BlackBerry ubuchwepheshe magnetic futhi omuhle ukuthungwa enkulu lesikhumba. umsukagridi Original kuqinisekisa zokwakha zeqophelo eliphezulu nokuphila umkhiqizo eside.
Case-pocket ihlanganisa cishe ngokuphelele smartphone, ukuyivikela zonke izinhlobo yokulimala. Ukuze ukhiphe idivayisi, uzodinga kancane donsa phezulu kwalo, kulula ukwenza, sibonga phambi elifushane surface kancane. ikhava Ngaphandle wenziwe high okuqotho, ngaphakathi uphahlwe Indwangu — lokhu materials olubucayi ngaphandle ukunwaya ifoni.
Case isekela umsebenzi magnetic, ukonga amandla webhethri. Umsebenzi Magnetic kusho cisha esibukweni bese Ukulokha ikhiphedi idivayisi ngenkathi khona kwakhe ngaphakathi kwesembozo. Ngaphezu kwalokho elula kakhulu kangangokuba babengaboni ukuthi njengesithelo abasebenzisi — ukuzama, uma kukhona naye akajwayelene.
Lihle isitayela boot ngokuphelele umphelelisi ukubukeka esiqinile smartphone: Isikhumba ukuthungwa enkulu isimo sezwe yemvelo kanye logo metal bheka esiqinile ezibizayo. Cover bafake ukumelana futhi isikhathi eside, ngeke kube eside imihuzuko ebonakalayo kanye imihuzuko. Ukwaluka emnandi touch.
Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black (Black) ACC-48097-201 (HDW-48096-001) ●